MACLUUMAADKA TARANKA EEYGA COCKAPOO IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyga Cockapoo iyo Sawiro
Cocker Spaniel / Poodle Dogs Nooc Isku Daran
Milo the Maxi Cockapoo (Cocker Spaniel / Standard Poodle mix mix ey). Isagu waa eey adeeg u tababaran.
Liistada Cockapoo Mix Eeyaha eyda
Cockapoo Mareykan ah
Cockapoo ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Cocker Spaniel iyo Poodle . Badanaa waxaa lagu dhashaa a Ciyaaraha Poodle ama a Poodle Guntin . Markuu Cocker Spaniel u dhasho a Poodle-ka caadiga ah waxaa lagu magacaabaa Maxi Cockapoo. Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta oo aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan . Fiiro gaar ah: qaar ka mid ah naadiyada Cockapoo ayaa ka shaqeynaya sidii Cockapoo looga dhigi lahaa eey saafi ah oo looga gudbayo jiil fara badan, halka kuwa kale ee wax soo saara ay ku dhegan yihiin isku darka aasaasiga ah ee 'Poodle / Cocker', iyagoo sheegaya inay doonayaan inay ilaashadaan saamaynta heterosis ee isku dhafka ah. Weydii breed aad la xiriirto nooca Cockapoo ee ay tarmayaan.
Miisaanka: Cayaaraha Teacup - oo ka hooseeya 6 rodol (3 kg.) Miisaanka koray
Cunto-ciyareed - ka yar 12 rodol (5 kg.)
Ghadafi / Yar - 13 illaa 18 rodol (5.5 - 8 kg.)
Maxi - in ka badan 19 rodol (9 kg.)
Dhererka: 14-15 inji (35-38 cm.)
Celcelis ahaan 16 sano
ACC = Naadiga Cockapoo ee Mareykanka
CCA = Naadiga Cockapoo ee Mareykanka
CCGB = Cockapoo Naadiga GB
NACR = Diiwaanka Cockapoo Waqooyiga Ameerika
Naadiga Isku-dhafan ee Canine-ka Mareykanka = Cock-A-Poo
Diiwaangeliyaha Taranka Nashqadeeyaha = Cock A Poo
Naadiga Naqshadeeyaha Eeyaha Ey Dhismeedka = Dock-A-Poo
Diiwaanka Canine-ka Caalamiga ah ee naqshadeeye®= Cockapoo
Matty the Cockapoo (Cocker Spaniel / Poodle mix) markuu jiray 2 1/2 sano— Meelo aad iyo aad u tiro badan ayaa u oggolaanaya eeyaha inay soo galaan oo ay la raaxaystaan ​​maalinlaha caadiga ah ee la soo dirista milkiilahooda iyadoo ka soo horjeedda joogitaanka guriga maalintii oo dhan. Matty waqti fiican ayuu ku qaatay iyo waxyaabo badan oo maskax kicinta ah oo uu kaga adeeganayay Athleta. '
'Tani waa Shadow, oo ah lab Cock-a-poo da'da 10 jir. Waxaan ka qaadannay Hooska hoyga da'da 2 sano. Waxaan ogaanay inuu haysto suuxdin 2 toddobaad kadib markuu korsaday. Xaaladdiisa waa mid lagula tacaali karo daawooyin maalinle ah oo aan qaali ahayn, wuxuuna ahaa DIYAARKA UGU FIICAN! Haatan waa 15 jir welina laadaya, in kasta oo uu gaabinaayo. Isagu waa gacaliye iyo a dhabta eyga . Qof kasta oo la kulmay Hooska wuxuu rabaa inuu gurigiisa geeyo. Haddii aad raadineyso wehel, markaa Cockapoo waa xulasho wanaagsan. Hooska waa kookahayga 2aad. CAP-kayga koowaad wuxuu noolaa 16 sano. Waxay iyaduna ahayd eey cajaa’ib leh, in kasta oo aysan u baahnayn 'waqti dhudhun badan' sida Shadow uu sameeyo. Hooska ayaa deg degay tareen (bartay fadhiis, hadal, rogrogmo iyo joogis maalmo kooban). Annaga qudhiisa ayaa tababarnay. Wuxuu ku fiicnaa caruurtayda markii ay yaraayeen aadna wuu u aqbalaa dadka markay guriga soo galaan (dabcan waxoogaa ciil ah). Tayada ugufiican ee aan kahelay labadaba CAP-keyga waa inaysan aheyn kuwa wax cuno badan isla markaana aysan aheyn kuwa xunxun. Weligay guriga uma imanin si aan u arko kab la burburiyey, alaabta guriga oo la calaliyo ama qashin la burburin karo. Marna. Labadaba CAP-keyga ayaa guriga si buuxda u maamulayay weligoodna looma qixin. '
timo gaaban oo bernard puppy ah
'Mocha, oo halkaan lagu muujiyey 2 ½ sano waa haweeney Cockapoo ah oo leh jaakad waxyar ka duuban. Scooby, oo lagu muujiyey halkan 1 ½ sano jir waa lab oo leh timo jilicsan. Iyagu waa kuwo dhalaalaya, kalgacal leh oo dadka jecel. Labaduba waxay ahaayeen badbaadiyeyaal waxayna ku barbaareen dabeecad wanaagsan, bulsheed iyo xayawaan aad loo jeclaa. '
Daisy oo ah cunug madow iyo cadaan ah Cockapoo yar yar oo jirta 6 todobaad — hooyadeed waxay ahayd Poodle aabeheedna wuxuu ahaa Cocker Spaniel.
yar yar ee biinanka isku dhafka ah ee weiner
'Kani waa Emily, Cockapoo-ga oo jira 3 sano. Iyadu waa cajiib, aad bay u adeecdaa. Waxay jeceshahay bisadaha iyo eeyaha kale ee qoyska, iyo carruurta da'doodu tahay 9 iyo 4 sano. Koodhkeedu wuu yara qallafsan yahay. Waan soo gaabinayaa. Way ku raaxeysataa socdo iyo raacida baabuurta. Waxay jeceshahay inay daawato carruurta oo ku ciyaareysa goobta ciyaarta ee u dhow. Iyadu waa ilaaliye fiican waxayna igu baraarujisaa shanqar kasta oo aan iyada laga garan karin. Waxaan daawadaa Eyga Whisperer, akhriyaa buugiisa waxaanan raacay qaabkiisa hogaamiyaha baakadka. Waxay la shaqaysay dhammaan eeyadayda oo ay ku jiraan Mini Poodle iyo Sheltie . Farsamadii ugu fiicneyd ee aan barto ayaa ahayd sheegashada lahaanshaha alaabada. Eydaydu wax uun kama haystaan ​​shey kasta oo ay igala noqdaan. Bisaduhu waa sheeko kale! Waxaan nahay qoys 'degan oo adeecsan'.
Doodle eeyga Cockapoo ee 5 bilood jira isaga mujuruca toy .
'Chewy waa iskutallaab u dhexeysa an Isbaanish Mareykan ah iyo a shukulaatada Standard Poodle , oo loo yaqaan a Maxi Cockapoo . Waa 5 ½ bilood jir dhererkiisuna 20 inji yahay (laga bilaabo madaxa ilaa sagxadda) culeyskiisuna waa 25 rodol. Wuxuu bilaabay inuu cadaado, laakiin maaddaama jaakaddiisa qaangaarka ahi ay bilaabmayso inuu soo baxo wuxuu soo saarayaa midabkan khudradda.
'Kani waa Bubba, Cockapoo indhahayga buluug ah, 2-sano jir Guntin Guntin / Mareykan Cocker Spaniel, iyo eyga 5aad. Runtii isagu waa makhluuq cajiiba, oo aad u caqli badan. Wuxuu yaqaan xeelado kala duwan oo kaligiis ayuu waxyaabo ku bartaa. Tusaale ahaan, wuxuu bartay sida loo furo albaabka shaashadda isagoo ku riixaya sankiisa meesha dillaacsan, wuxuuna furi karaa dhammaan albaabbada guriga gudihiisa haddii ay waxyar ka yaraadaan. Bubba waa mid aad u cajaa'ib leh, qurux badan oo jecel qof walba. '
'Waffles waa eey cajiib ah. Isagu waa isku dhaf u dhexeeya Cocker Spaniel iyo Poodle. Ma ciyo (waa wax weyn haddii aad ku nooshahay guri dabaq ah) wax badana wuu daadiyaa. Waxaan rajeynaynay eey gebi ahaanba aan daadin, laakiin wuxuu leeyahay sifooyin kale oo badan oo wanaagsan waxaan qaadan doonaa dhowr timo halkan iyo halkaas.
Phantom the Cockapoo at 11 sano jir isla markii uu jaray timo cusub (ubax yar)
min pin weenie ey isku dar ah
Eeg tusaalooyin badan oo ka mid ah Cockapoo
Sawirada Cockapoo 1
Sawirada Cockapoo 2
Sawirada Cockapoo 3
Sawirada Cockapoo 4
muqisho basset Cocker for sale
isku darka jaalaha ah iyo shaybaar shukulaatada
ingiriisiga mastiff isku darka wolfhound Irish
isku darka dahab ah iyo spaniel Cocker
celcelis ahaan miisaanka loogu talagalay spaniel cocker
isku darka shaybaarka feedhka amerikanka bulldog